We She Me: Hit တစ်သိန်း အမှတ်တရ
JulyDream - 8/3/08, 7:47 PM
ရှေ့ဆက်ပြီး အမြတ်တွေရအောင် ထပ်လာဖတ်နေပါအုံးမယ် ခင်ဗျာ။ ဒါနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အမြတ်ရှယ်ယာ ခွဲပေးမလား ဟင်။ :P
pandora - 8/3/08, 9:15 PM
ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် အားပေးနေပါတယ် ကိုယ့်ဆရာ.။
ဒီဘလော့ဂ်မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အချက်ကလေးကတော့ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဒီလိုပဲ ချရေးလိုက်တာထက် သူများတွေ ဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့ အနေနဲ့ သေသေချာချာ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ပြင်ဆင်ရေးထားတဲ့ စေတနာကို မြင်ရတာပါပဲ။
ဒါနဲ့ ၀ါစာဘီ မဟုတ်ဘူးကွဲ့ စာရှိမိပါ။ ဟီးး။
မဇနိ - 8/3/08, 9:28 PM
အပြောကောင်းတာရော၊ အရေးကောင်းတာရော၊ စေတနာပါတာတွေရော၊ ဆွဲဆောင်တာတွေရော၊ နည်းပညာတွေရော၊ ဗဟုသုတဝေမျှတာတွေရော ဘာမှကို လိုက်မမှီအောင် ဘက်စုံကောင်းပါတယ်ဗျာ။
ဒါနဲ့ “သူမ“ ကို ကျနော်လည်း ကျေးဇူးတင်လို့ မရဘူးလားဗျာ။ “တိန်“
ပို့စ်အသစ်တွေနဲ့ လာလည်သူတွေနဲ့ ဒီဘလော့ခ်လေး အမြဲစည်ကားနေပါစေဗျာ။
Anonymous - 8/3/08, 9:30 PM
You've spent altogether 1 month of blogging within last 15 months. I hope it's worth it for you and your family.
MyMetro - 8/3/08, 9:42 PM
အားကျပါတယ်...အကို။ နောက်ထပ် ဟစ်တသန်းပြည့် အမှတ်တရကိုလည်း အမြန်ဆုံးဆင်နွဲနိုင်ပါစေ...။
Kay - 8/3/08, 9:44 PM
အားပါး..ဟစ် တသိန်း နဲ့ တစ် ဖြစ် ဖို့ တောင် မလွယ် ပါလား။ လျင်မြန်စွာ..ဟစ် တွေ တက်နေလို့။း)
တယ်လည်း ရောင်းကောင်းတာပဲ..တနေ့ကို..၃၀၀ တောင်ကုန်တယ် ဆိုတော့။ ဘရိတ် Break even ကျော် ရင် profit ရ အောင် လုပ် တော့လေ။
အတွေး ရဲ..အရေး ရဲ လို့ ပြော လိုက် လို့..နောက်..ဖွန့်ကာလာ ပါ ပြောင်းမှ ပဲ။း)
sawphonelu - 8/3/08, 11:04 PM
ဂုဏ်ယူ ပါ တယ် ။ အန်ဒီ ရေ ။ ကိုယ်တို့ သုံး ယောက် ဘီယာ အတူတူ ပြန် သောက် ချင် လှ ပြီ ။
imaginary clouds no2- 8/3/08, 11:28 PM
အန်ဒီရေ ။ စာတွေ ဆက်ရေး ပါ အားပေးနေပါတယ် ။ ကျနော်ကတော့ ဒီဘလော့ကနေ တခြားဘလော့ဂါများရေးထားတာတွေပါ တချိန်တည်းတွေ့နေရတာကို ကြိုက်တယ် ။ ဘလော့ရေးသူခြင်း ပိုရင်းနှီးလာစေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ် ။
nu-san - 8/3/08, 11:58 PM
အဟီး.. Andy ရေ.. တူများကိုရေးထားတာ မြှောက်ချင်လာသလိုပဲ.. :d
အမှန်က Andy စာရေးကောင်းတာရယ် ကလေးတို့မေမေရဲ့ စိတ်ကူးတွေရယ်ပေါင်းထားလို့လည်း ပါတာပေါ့။ Andy ရဲ့ ပို့စ်တွေ စဖတ်ဖူးကတည်းက အမက သဘောကျတာ။ ဟို..ရွှေညောင်ပင် ကြက်သားသုပ် ကစတယ်ဆိုရမယ်။ တချုိ့ပို့စ်တွေကျတော့လည်း ဗဟုသုတရတယ်လေ။ ဒီဘလော့ခ်ကို လာလည်တာက ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ blog ရေးတယ်ဆိုတာထက် စာရေးကောင်းလို့ လာဖတ်တာက ပိုပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း ကလေးသံယောဇဉ်လေးတွေပေါ့။ ကလေးတွေကို အနီးကပ်မမြင်ရပေမယ့် သူတို့ကိုလည်း ကိုယ် အဝေးကနေ ချစ်တယ်လေ။ (ဘလော့ခ်ပေါ်ကနေပြောနေတာမို့ အပြင်မှာသာဆို ချစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ မတွေးပါနဲ့နော်. :P တကယ်ချစ်တာ.. :) ) အဲဒါကြောင့် တရက် တခါ ၂ ရက်ခြားတခါတော့ လာကြည့်ဖြစ်တယ်။ တခါတလေဆို ဓာတ်ပုံတွေချည်းပဲ ထိုင်ကြည့်ပြီး သူတို့ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို သဘောကျနေတာ။ နောက်ပြီး တချို့ပို့စ်တွေဆိုရင် ဘယ်သူ ဘာအသစ်တင်ထားလဲဆိုပြီး လင့်ပေးထားတော့ အလွယ်တကူပဲ သွားဖတ်လို့ရတာလည်း သဘောကျတယ်..
Blogspot ကြီးရှိနေသရွေ့၊ blog လို့အခြေအနေ ပေးနေသရွေ့ စာရေးပါ Andy!! အမြဲတမ်း WeSheMe ပရိသတ်ပါ။ :)
Anonymous - 8/4/08, 12:04 AM
ကိုအန်ဒီ ဒီဘလောဂ့်စရေးတော့ မိသားစု ဘလောဂ့်လေးအနေနဲ့ စ သတိထားမိတာ ။ အဲဒီတုန်းက အဲလိုပုံစံလေး ရေးတာမျိုး မတွေ့ မိဖူးလေ ။ နောက်တော့ ကိုကင်ဆာဖွား ၊ ကိုမောင်တိန် ၊ ကိုစောဖုန်းလူ တို့နဲ့ တပြိုင်နက်တည်း ဒီဘလောဂ့်ကို သိရာက စိတ်ထဲမှာ စလုံးက လူအချင်းချင်း တကယ် ခင်သွားမိတာ ။ ကိုအန်ဒီ နဲ့ အမ အော်ဇီပြောင်းသွားတုန်းကတောင် “အော် လူချင်းတောင် မတွေ့ ရခင် တခြားတနေရာပြောင်းပြီ” ဆိုပြီး ၀မ်းနည်းမိတာ အမှန် ။
ဟစ် တစ်သိန်း ဖြစ်ပြီဆိုတော့ တကယ်ပဲ အမြတ်ထွက်ပြီပေါ့လေး) ဂျစ်ကတော့ ၀ီရှီမီကို လာရင် ၊ ကိုအန်ဒီနဲ့ အမ တို့ ရဲ့ သား၂မီး၂လေးတွေ ဘလောဂ့်ပေါ်မှာ တီတီ ဦးဦးတွေလက်ပေါ် ကြီးလာပြီး ၊ နောင် နှစ်နှစ်ဆယ်မှာ သူတို့ ဒီဘလောဂ့်မှာရေးကြတာတွေ ပြန်ကြည့်ပြီး ဘယ်လို ပြန်မြင်ကြမလဲလို့ စဉ်းစားမိတယ် ။
အကို နဲ့ အမရေ .. ဆက်သာ ရေးပါဗျို့း)
khin oo may - 8/4/08, 12:54 AM
hit ကောင်းတဲ.အတွက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်. ဖတ်လာတာ နဲနဲတော.ကြာပါပြီ. ကိုယ်.မှာ့့hit မကောင်းပေမဲ.ဖြည်းဖြည်းတော.ကြို.းစားသွားရမှာပေါ.လေ. hit မကောင်းရင် စိတ်မကောင်းတာ က ငါ ကြို.စားဘို.လိုသေးတယ်. ငါရေးတာ လူ စိတ်မဝင် စားပါလား လို.။မကောင်းပါလားလို.စိတ်မကောင်းတာပါ. ဒါပေမဲလည်. ရေးချင် တာ က အဓီက ဆိုတော.လည်. ဆက်လက် ရေးနေပါဦးမယ်။ဲ
Soe Mya Nandar Thet Lwin - 8/4/08, 1:08 AM
Congratulation Ko Andy!! :))
I'd like to say Since i started to know your blog, I couldn't resist your persuasiveness of writing skills as it's tremendously fascinating me.
To earn the hits over 100 thousands isn't easy job for sure. But u proved that u achieved it and your blog deserve to have those amount of hits as i can see u putalot of efforts in it.
I do envy youalot, Hellalots. Wish you all the best and keep rolling. You are one of my TOP 10 favorite of Myanmar blogger.
All my faith in you.
Ko Paw - 8/4/08, 1:55 AM
အံမယ်လေး.... ကိုအင်ဒီရယ်။ သူများဘလော့ဂ်မှာ တခါနှစ်ခါ ဓါးထမ်းပြီး လိုက်ငြင်းမိတာလေးက လွဲလို့ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်မှာ သုတေသန စာတမ်းမျိုး မရေးမိရပါလား ဆရာရယ်။ ရေးရင်လည်း သူများရေးတာကို ဘာသာပြန်တာလောက်ပါ။ နေရင်းထိုင်ရင်း ဗဟုသုတ ဟင်းလေးအိုးကြီးဘ၀ ရောက်ရရှာတော့မယ်..အယ့်ဟယ်။ အယ့်ဟယ်။
Anonymous - 8/4/08, 2:54 AM
congratulation par wesheme family. blog ဖတ်တာ ၀ါသနာ ပါလာတာ wesheme ဘလော့ခ် ကို လာလာလည်မိလို့ ။
ကလေး ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ တခြားမိသားစုဓာတ်ပုံတွေရယ် (စပ်စုတာ:D)
ပို့စ်တွေက ဖတ်ရတာ ကောင်းလို့ရယ်
ဒီဘလော့ခ်ရဲ့ ထူးခြားချက်က မိသားစုဓာတ်ပုံတွေ အကြောင်းတွေနဲ့ အပြင် တခြားကောင်းတဲ့ဘလော့ခ်ဂါတွေ ကို လင့်ခ် ထားတော့ ဒီဘလော့ခ်
လာလိုက်ရင် အချိန်တိုအတွင်း အမြန်ဖတ် အားလုံးသိနိုင်လို့ရယ် ပြည်စုံနွေးထွေးတဲ့ မိသားစု ရနံ့ ကိုပေးနိုင်လို့ရယ် လာလည်ရတာ တန်တယ်။ပျော်လဲပျော်တယ်။ အားပေးနေပါတယ်ဗျုိ့။
Anonymous - 8/4/08, 4:32 AM
Congratulation!!!!! I am your regular visitor. Please keep going!
TZA - 8/4/08, 9:45 AM
ဝမ်းသာပါတယ် မနာလိုဖွယ်ကောင်းအောင် လိုက်ဖက်ချစ်ခင်ကြတဲ့ ကိုအန်ဒီမိသားစုရေ..
ဘလော့ဂ်ထက် ဒီလိုမိသားစုဘဝကို ကျနော် ပိုအားကျမိပါတယ်၊ ဘယ်တော့နံပါတ်သုံးမွေးမလဲဗျ။
လင့်ခ်ဆိုလို့ အဲဒီ ချီ/ချေ ပို့စ်ကိုအတော်ရှာယူလိုက်ရတယ်၊ ကျနော်ဖတ်ဖူးတာပဲ မှတ်မိတယ်၊ ဘာခေါင်းစဉ်တပ်ထားမှန်း မသိတော့ဘူးလေ။
Anonymous - 8/4/08, 10:14 AM
Congratulation! for Ko Andy and your family.
mtj - 8/4/08, 10:16 AM
ကျနော်တို့ကတော့ အရင်းကြေဖို့ ဝေလာဝေး အရှုံးကြီးရှုံးနေလို့ ကုမ္ပဏီ ဒေ၀ါလီခံဖို့ စဉ်းစားနေရတယ်။ tips လေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။ :)
ပီတိ - 8/4/08, 12:30 PM
ဒီဘလော့ကို စဖတ်တော့ စေတနာနဲ့ ရေးထားတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ နောက်ပြီး ဖတ်လိုက်တိုင်း ဗဟုသုတ မှတ်စရာ တခုခုပါနေတော့ နေ့တိုင်းလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပို့စ်တိုင်းကို အချိန်အကြာကြီးယူရေးသားတဲ့ ကိုအန်ဒီရဲ့ စေတနာကိုလည်း ချီးကျူးပါတယ်။ ဟစ် ၁၀၀ ၀၀၀ ပြည့်တယ်ဆိုတာကလည်း စေတနာရောင်ပြန်ဟပ်တာပေါ့။
အရင်းကြေလို့ အမြတ်များများထွက်ရင် ဘလော့ရေးစားလို့ရပြီ… ;)
ကိုအန်ဒီနဲ့ မိသားစု ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။
မြရွက်ဝေ - 8/4/08, 1:20 PM
Congratulation ပါ။ မnu-sanဆီကနေ သိပြီး ခဏခဏ လာလည်ဖြစ်တာပါ။ ဘလော့လောကမှာ ရှားပါးတဲ့ မိသားစုဘလော့လေးမို့ အားကျမိတယ်။ ဗဟုသုတရတဲ့အပြင် ဘေးကလင့်ကနေ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ဖတ်ရလို့ပါ။
MELODYMAUNG - 8/4/08, 2:38 PM
အားကျမိပါတယ် အားပေးနေပါတယ်ဗျို အရင်းကြေမကြေတွက်ပြထားတာလည်း စိတ်ဝင်စားမှတ်သားစရာဗျို လေးစားပါ၏ ကိုအန်ဒီရေ
Anonymous - 8/4/08, 3:36 PM
Congratulation!I am also your regular visitor. As soon as I ve free timeabit, I m ready to visit your blog. Please go ahead!!!
Anonymous - 8/4/08, 4:50 PM
ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ... ဘာပဲပြောပြော ဒီလိုလုပ်နိုင်တာ နည်းတဲ့ အရည်အချင်းမှ မဟုတ်တာ... အဆင်ပြေပါစေဗျာ... :)
Andy Myint - 8/4/08, 10:14 PM
အခုကတည်းက ခွဲပေးနေတာလေ JulyDream ရဲ့.. ကျွန်တော့် အတွေအကြုံတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ Asset တွေပေါ့
ကျေးဇူး မပန်.. အဟီး ပြင်လိုက်ပြီ .. ထင်တော့ထင်သား.. စာရှိမိလို့
ကျေးဇူး မဇနိ.. တင်ပါဗျာ.. တင်လို့ ရပါတယ် အဟီး
Tone အယူလွဲမှာ စိုးလို့ မြန်မာလိုပဲ ပြန်ရေးလိုက်တယ် စာဖတ်သူ။4hrs x 150 post = 600 hrs / 24 hrs = 30 days.. Nice point. တစ်နေ့လုံးရဲ့ ၁၅ ပုံ တစ်ပုံလောက်တော့ ကျွန်တော့် ကိုယ့်ပိုင် အချိန် ဖြစ်သင့်တယ်လေ.. ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော် တီဗွီ လျှော့ကြည့်ပြီး စာရေးပါတယ်.. တစ်ခါတစ်လေ ညနည်းနည်း အနက်ခံပြီး စာရေးပါ.. တစ်ခါတစ်လေ ရုံးမှာ စာရေးပါတယ်။ မိသားစု အချိန်ကိုတော့ အထိခိုက် မခံပါဘူး။ ကလေးနဲ့ ဆော့တယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆို ဈေးဝယ်တယ် မီးဖိုထဲ ၀င်တယ်.. မိန်းမကလည်း ကျွန်တော့် စာတွေ ဖတ်နေရရင် ပျော်တဲ့ အတွက် Every secound counts တယ်လို့ပဲ ဆိုပါရစေ.. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲတော့ ဒါမျိုး စာဖတ်တာမျိုး ကိုယ်အကျိုး ရှိတာ လုပ်ရင်လည်း ကိုယ့် အတွက် အကျိုးရှိမှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးတော့ ၀င်လာပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကော့မန့် အတွက် ကျေးဇူးပါ။
တစ်သန်းတော့ မလွယ်ဘူး ထင်တယ် ကိုမီထရို
ကျွန်တော် ဒီပို့စ်တင်တော့ တစ်သိန် တစ်ထောင် ကျော်နေပြီး မကေရဲ့ ။ ကြားထဲမှာ ရွာသူ နှောက်ယှက်နေလို့ အဖုအထစ်လေးတွေ ဖြစ်သွားတယ်။ အဟီး... ကျွန်တော့် ဖောင့်တွေကတော့ မှိန်တိန်တိန်လေးတွေ ...
အေးဗျာ.. ကိုစောရေ.. လာလည်ပါလား ၀ိုင်အ၀ တိုက်မယ်။
မှန်တယ် မောင်တိန်... ဒီလိုပဲ ခင်မင်လာကြမှာပဲ။ အခွင့်အရေး ရသလောက်တော့ ဆက်ရေးပါ့မယ်။
ဘုတ်ကလည်း ကျီးကို မြှေက် ကျီးက ဘုတ်ကို မြှောက်ပေါ့ မနုစံ
ဟုတ်တယ် ဂျစ် .. ကျွန်တော်တို့တောင် သြော်ဇီ မလာခင် ဂျစ်တူးတို့ကို ဖိတ်ပြီး ထမင်းကျွေးရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားမိသေးတယ်.. တကယ်ပြောတာ
ဟုတ်တယ် မခင်ဦးမေ.. ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလို ဖိရေးလာလို့ ပို့စ်တွေ များလာတာ
Well said, sis Nandar.. Thanks for being in ur top 10 list.. :) Cheers!
အခုတလော ဟော့နေတာလည်း ကိုပေါ ကော့်မန့်တွေလေ... ဖတ်လို့ကလည်း ကောင်းတော့ မနည်း စောင့်ဖတ်နေရတယ်။ လက်တလော ခေါင်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့လူကို ဥပမာ ပေးလိုက်တာပါ။ အချွန်နဲ့ မတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.. အဟီး
Thanks Reader.. i will try
ဘယ်ပုံတွေများ လျှောက်ကြည့်နေပါလိမ့် စာဖတ်သူရယ်။ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ စာဖတ်သူ
ဟောင်တာရှောင် ကိုတီဇက်အေ.. ပြောတာ ကောင်းတယ်ကို စီလုပ်လို ပြောကြည့်တာ။ နံပါတ်သုံးတော့ မလုပ်ပါရစေနေဗျာ... အဟီး ... ကိုတီဇက်အေရော ဘယ်တော့လည်း ..Better late than never ပါလေ.. အဟီး
Thanks Ko Myo Kyaw Htun....BTW.. Open id is nice.. :)
ဒေ၀ါလီတော့ မခံပါနဲ့ဗျာ.. ဘလောက်ရေးတာ နေ့တိုင်း အမြတ်ထွက်နေတာပဲ MTJ
ကျေးဇူးပါ ကိုပီတိ.. စေတနာ ရောင်ပြန်ဟပ်တယ် ဆိုတာတော့ ကြိုက်တယ်... အခုလည်း ဘလောက်ရေး စားနေတာပဲလေ.. ပီတိကို စား အားရှိပါ၏တဲ့.. ကိုပီတိကို ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်...
ရှားရှားပါးပါးလို့ ဆိုလာပြီး အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ မမြရွက်ဝေ.. အဟီး
ကျေးဇူးပါ MELODYMAUNG... လောလော ဆယ်တော့ အရင်းကြေအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။
Thanks regular reader...
မြှောက်နေပြန်ပြီ maungpete... ကြိုးစားပါမယ်။
တန်ခူး - 8/6/08, 2:39 PM
အင်းနောက်တောင်ကျသွားပြီ… ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်း ကိုအန်ဒီ… ဟစ်တသိန်းမှသည်… ဟစ်တသန်းထိ….
စုစု - 9/25/12, 7:17 PM
အစ်ကိုအခု အောင်မြင်တဲ့ BLOG ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေပြီလေ။